Condado Tropic Sun Apt B 3 imizuzu ukuhamba ukuya eBeach - I-Airbnb
Condado Tropic Sun Apt B 3 imizuzu ukuhamba ukuya eBeach
Indlu enkulu enendawo yokutyela. Ukuhamba umgama ukuya kwintengiso, kwiindawo zokutyela, elunxwemeni, kwiibhari. Ukuhamba ngemizuzu eyi-10 ukuya kwisikhululo seenqwelomoya. Yonwabela impepho yeCaribbean kunye nayo yonke imimangaliso emihle yasePuerto Rico ngelixa uhlala kwindawo yethu epholileyo yestudiyo, ilungele izibini, iintsapho kunye namaqela. Sibekwe embindini phakathi kwazo zonke iilwandle ezimangalisayo kunye neSan Juan endala kufuneka ibonelele ngemizuzu emi-5 yokuhamba ukusuka eCondado Beach edumileyo kunye neStrip.
Isitudiyo B (iyunithi ephakathi esezantsi) ikunika indawo entle yestudiyo enegumbi lokuhlambela labucala elibandakanya iA/C. Inebhedi ye-Queen e-1 kunye neebhedi zesofa, ifriji encinci, i-microwave, kunye nomenzi wekofu. I-Condado Tropic Sun nayo iza neetawuli.
4.54 out of 5 stars from 121 reviews
4.54 · Izimvo eziyi-121
Ubumelwane obuzolileyo. Indawo entle kakhulu.
Siphumeze imigaqo yokucoca ephuculweyo kunye namanyathelo okubulala iintsholongwane, kubandakanywa ukusetyenziswa komgangatho wesibhedlele, iimveliso zokubulala iintsholongwane ezivunywe yi-CDC kunye ne-Arhente yoKhuseleko lokuSingqongileyo yase-U.S.
Izimvo eziyi-1 224